BBC - Eyinkunzi - Kutheni izigidi Isitshayina abantu bamele staying omnye
BBC – Eyinkunzi – Kutheni izigidi Isitshayina abantu bamele staying omnye
Kwi-China, kukho igama unmarried abantu phezu
ngonaphakade-langoku, uthi Roger Zhou, ngubani ngoku watshata kwaye ubomi kwi-Suzhou. Abazali bacinge ukuba banoxanduva ukunceda wabo omdala umntwana qala usapho, athi. Ngoko ke, baya koxinzelelo umntwana wabo ukufumana iqabane lakho, yiya dating kwaye balungiselele a wedding. ‘Eyimfama umhla, nto leyo arranged ngabazali, ingu kakhulu ethandwa kakhulu, uthi Melinda Hu, ngubani kwaye omnye. Abazali ubuso omkhulu loluntu criticism ukuba intombi yabo okanye unyana akakwazi ukufumana watshata ngoko ke ngokuqhelekileyo a kubekho inkqubela s abazali bamele eager ukuba vumelani zabo intombi yiya kwi eyimfama umhla kwaye get watshata phambi reaching. Ngoko ke kukho i-umphandle umtshato kwamanye amazwe. Ngexesha elinye ilizwe ke, oyena kwi-i-shanghai, matchmaking yembombo ngu inundated ngabazali abo ngeposi isandla-ukubhalwa adverts kuba zabo-kanye abantwana kunye iinkcukacha ezifana ingeniso, imfundo kunye personality. Abanye abazali zithe ezaziwayo ukundwendwela kwimakethi rhoqo ngeveki neminyaka kunye akukho impumelelo. Shift njani na abantu kuhlangana kunye njani abantu woo partners, ngaphezu kwazo zonke, putting ngakumbi ugxininiso lwalo kwi-uthando kunokuba kwi isebenziseke considerations ezifana-mali yokhuseleko. Omnci Li, umzekelo, uthi yena kukuthi akukho rush ukufumana watshata preferring ukuba ulinde umntu olilungu kukunceda kakhulu intliziyo yakhe kwaye umphefumlo. Ukuba izimvo ngalo ibali okanye nantoni na enye into wena ndakubona kwi-BBC Imali, nceda intloko phezu zethu Facebook iphepha okanye umyalezo kuthi ngomhla Itwitter.
Sheng nan, intsingiselo leftover abantu kuba noko ukufumana umfazi kwaye kwilizwe kunye nokulima ngokwesini isithuba, oko kukuthi omkhulu ingxaki. China sele izigidi ezininzi ngakumbi abantu kunokuba abafazi, hangover lizwe ke omnye-umntwana mgaqo-nkqubo, esibizwa overturned, nangona yayo iziphumo ziya yokugqibela decades ngakumbi. I-ngokwesini imbalance ngu owenza kube nzima kuba baninzi abantu ukufumana iqabane lakho kwaye isithuba kukuba sifuna widen. Ngo, ayo s uqikelelo kuya kubakho yezigidi ngaphezu abantu kunokuba abafazi ikhangela a iqabane lakho. Ngowe yakhe incwadi, Demographic Elizayo, i-american ezopolitiko umhloli Nicholas Bernstadt cites projections ukuba yi, ngaphezu a zekota Isitshayina abantu kwiindawo zabo s ayisayi kuba watshata. Ngoku, kunye kude abangaphantsi abafazi kunokuba abantu, ugqatso ukufumana ezilungele iqabane lakho uze uphumelele ibhaso yakhe phezu phambi kokuba umntu ongomnye ingaba sele ekhokelwa abanye abantu ukuya omkhulu lengths ukufumana umfazi. Baya. bechitha baninzi sums kwi-creative, ngamanye amaxesha luphumelele, amanyathelo ukuphumelela umfazi phezu. Kwi, Isitshayina businessman wakhe s reportedly sued a i-shanghai esekelwe isihloko-arhente ngokusilela ukufumana kuye umfazi, ekubeni wahlawula inkampani yezigidi yuan (dollazi m) ukuze yenze imisebenzi i-kofakwano phendla. Kwelinye ityala, ikhompyutha umdwelisi ukusuka e-afrika isixeko Guangzhou bought iPhones njengenxalenye i-elaborate umtshato proposal girlfriend yakhe. Ngelishwa, naye ajike phantsi, kunye yakhe humiliation exacerbated njengoko iifoto sehlo baba widely usharedi kuwo loluntu eendaba. Inxalenye ingxaki kukuba ubudala kwaye iindlela ezintsha intlanganiso abantu asingawo isoloko isebenza. Isitshayina Entsha Unyaka sele ixesha elide ukuba ithuba kuba omnye abantu kuhlangana a iqabane lakho. Abantu abaninzi tyelela izindlu osapho kunye nabahlobo ngexesha festival, oko kwenzeka phakathi emva kwexesha ngojanuwari mid-februwari, ngoko ke singletons kuba abaninzi chances ukuhlangabezana enokwenzeka partners. Kodwa ukuba longstanding tradition intlanganiso a enokwenzeka iqabane lakho sele inikwa indlela kwizinto zala maxesha. I-intanethi dating likhule ngokukhawuleza kwi-China, njengoko kwenye indawo, kwaye messaging apps ezifana WeChat ingaba kujike ethandwa kakhulu iindlela yokufumana ukwazi abantu. China dating ubizwa ngokuba ukubonelelwa vula kwaye ukubonelelwa abantu abaqhelekileyo kunye iindlela Western amazwe kwiminyaka yakutsha nje, uthi Omnci Li. Young izizukulwana kuba ngaphezulu oyikhethileyo kwaye zezi zilandelayo iintliziyo zabo kunokuba abazali. I-myriad iindlela ukudibanisa luhamba i-ibhinqa uninzi kuba upended indlela abantu kuhlangana kwaye inkundla kwi-China. Omnci Li, ukususela Suzhou kwi-Jiangsu phondo, China s mpuma central coast, omnye kwaye yayo s. Yena sele uqaphele lokukhula amanani abantu ngomhla i-icacile icandelo lomboniso organizing njengoko njengesiqhelo kwaye hiring yoluntu imfundo venues kuba dating iziganeko. Abanye abantu bamele waguquka psychologists kwaye stylists ukwenza kwabo ngakumbi appealing. Kwaye ukuphepha prying imibuzo evela inquisitive abazali, ezinye zi nkqu resorting ukuba hiring iibhonasi girlfriends ukuba ikho ebazalini babo usebenzisa ii-apps ezifana Hire Kum Ply. Iingxelo phakamisa hiring a girlfriend unako iindleko phezulu, yuan (dollazi) ngosuku. Iingxaki kuba abantu kwi-ingxowa-a ingaba iqabane lakho uninzi acute kwi-poorer ezisemaphandleni, wenza worse yi-elide-igcine imicimbi yayo ukuba indoda kufuneka ibe nako ukunikela a decent inqanaba mali ukhuseleko phambi kokuba unako ekhuselekileyo umfazi. Hong Yang, ngubani ngoku watshata kwaye, yena s, lichaza oku njengo-China ke umama umthetho ezoqoqosho. Ukuba abantu ufuna ukufumana watshata, elizayo umama mthetho uza isicelo ukuba yena kuqala buys indlu phambi ngokuxoxa elandelayo inyathelo. Ke esinye isizathu indlu amaxabiso zithe ngoko ke olomeleleyo kwiminyaka yakutsha nje, yena utshilo. Kodwa le mali mthwalo ngomhla abantu kanjalo lokwenza oko harder kuba baninzi abafazi ukufumana iqabane lakho. Ukuba idibanisa ukuba lo mba, kunye enkulu amanani babantu, enaphatha ngenxa yemali iindleko umtshato, ingaba opting enye kamva. Kwaye xa besenza settle phantsi, bamele rhoqo ikhangela younger abafazi. Ubudala iimephu ezimbini ubudala okanye ngaphezulu ingaba ngokufanayo kwi-Isitshayina marriages. ‘Ke nzima kuba abafazi ukufumana ezilungele abantu emva kokuba zifikelele ubudala, uthi Hong Yang. Abaninzi eligible Isitshayina abantu ufuna enye younger kwaye pretty girls. Abafazi, ngokulandelelanayo, jonga kwezezimali, apho leans kwiintlanganiso yobudala engama-abantu, ingcaphephe kuthi. Kunjalo, imigca ethe unako kanjalo abe yinyaniso. Kulungile-educated kwaye financially elizimeleyo abafazi abo bahlala omnye zibizwa ngokuba unwanted girls, uthi Heather Ma, lowo utshate, yayo s kwaye abahlala i-shanghai. Abazali bamele omkhulu imvelaphi koxinzelelo ukufumana iqabane lakho, pronto.
ngonaphakade-langoku, uthi Roger Zhou, ngubani ngoku watshata kwaye ubomi kwi-Suzhou. Abazali bacinge ukuba banoxanduva ukunceda wabo omdala umntwana qala usapho, athi. Ngoko ke, baya koxinzelelo umntwana wabo ukufumana iqabane lakho, yiya dating kwaye balungiselele a wedding. ‘Eyimfama umhla, nto leyo arranged ngabazali, ingu kakhulu ethandwa kakhulu, uthi Melinda Hu, ngubani kwaye omnye. Abazali ubuso omkhulu loluntu criticism ukuba intombi yabo okanye unyana akakwazi ukufumana watshata ngoko ke ngokuqhelekileyo a kubekho inkqubela s abazali bamele eager ukuba vumelani zabo intombi yiya kwi eyimfama umhla kwaye get watshata phambi reaching. Jonga umfanekiso Abazali kukhangelwa yokhuphiswano kwi-mtshato kwimakethi eludongeni kwi-i-shanghai (Credit: Almay) Ngoko kukho i-umphandle umtshato kwamanye amazwe. Ngexesha elinye ilizwe ke, oyena kwi-i-shanghai, matchmaking yembombo ngu inundated ngabazali abo ngeposi isandla-ukubhalwa adverts kuba zabo-kanye abantwana kunye iinkcukacha ezifana ingeniso, imfundo kunye personality. Abanye abazali zithe ezaziwayo ukundwendwela kwimakethi rhoqo ngeveki neminyaka kunye akukho impumelelo. Shift njani na abantu kuhlangana kunye njani abantu woo partners, ngaphezu kwazo zonke, putting ngakumbi ugxininiso lwalo kwi-uthando kunokuba kwi isebenziseke considerations ezifana-mali yokhuseleko. Omnci Li, kuba umzekelo, uthi yena kukuthi akukho rush ukufumana watshata preferring ukuba ulinde umntu olilungu kukunceda kakhulu intliziyo yakhe kwaye umphefumlo. Ukuba izimvo ngalo ibali okanye nantoni na enye into wena ndakubona kwi-BBC Imali, nceda intloko phezu zethu Facebook iphepha okanye umyalezo kuthi ngomhla Itwitter
← Wuhan, China Apho Ukufumana Girls kuba Ngesondo Omnye Mans Ukuhamba
Apho unako a mhlophe guy kuhlangana aph Asian girls. Ividiyo Dating →